घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाए::KhojOnline.com
घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाए
चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाएको हो । योसँगै अब घरबहाल करको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि घरबहाल करको दोहोरोपन हटेको हो ।
संविधानले घरबहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकारसूची भित्र सूचीकृत गरिसकेको छ । अन्तर -सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७४ ले पनि घरबहाल करको संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
तर, हालसम्म आयकर ऐन -२०५८ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर केन्द्रमा आउँथ्यो । यो व्यवस्था अनुसार भाडा आय शिर्षकमा केन्द्रले यस्तो कर केन्द्रमा आउँथ्यो । त्यस्तै, २ प्रतिशत कर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन -२०५५ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह (साविकका स्थानीय निकाय) ले संकलन गर्दै आएका छन् ।
अब भने स्थानीय तहले कानून बनाएर आफैंले घरबहाल कर लगाउनेछन् । यसको दर पनि स्थानीय तहले आर्थिक कानून बनाएर आफैं तोक्नेछन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका बासिन्दा दोहोरो कर तिरिरहेका थिए ।
यद्यपि, यो व्यवस्था व्यवसायीक प्रयोजनले लगाइने भाडामा भने लागू हुनेछैन । उदाहरणका लागि विशालबजार लगायतका ठूला कम्पनी जसले आफ्ना भवन भाडामा लगाएका छन्, तिनको हकमा यो व्यवस्था आकषिर्त नहुने मन्त्रालयले बताएको छ । यसको अर्थ गैरव्यवसायीक ढंगले प्राकृतिक व्यक्तिले लगाएको भाडामामात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
अर्थविद् शंकर शर्मा घरबहाल कर संकलनको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै गएपछि त्यसले कर संकलन प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।
स्थानीय तहलाई कर संकलनका सम्बन्धमा केन्द्रले आधार तोक्दिँदा सहज हुने शर्माको भनाइ छ । यद्यपि, संविधानले स्पष्टसँग अधिकारी स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब केन्द्रमा आउने घरबहाल करको स्थानीय तहमा नै रहनेछ । यससँगै अब स्थानीय तहलाई घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा एकल अधिकार कायम रहनेछ । घर -जग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, सवारी साधन शूल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर भने स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा छन् ।
सोम, चैत्र १२, २०७४ मा प्रकाशित
महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरको प्रथम नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा बेलौरी नगरपालिकाको योजना शाखा प्रमुख हृदयराज बजगाईंले उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सम्मानित गरिएको थियो । न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनमा बेलौरी नगरपालिकालाई सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर बजागाईंलाई सम्मानपत्र र...
अर्थतन्त्रको अवस्था दिनानूदिन कमजोर बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आत्तिन थाले
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको अवस्था दिनानूदिन कमजोर बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आत्तिन थालेका छन् । अर्थमन्त्री भएको ५/६ महिनासम्म ब्यापार घाटादेखि डराउनु नहुने तर्क राख्दै आएका अर्थमन्त्री अहिले त्यही ब्यापार घाटा देखेर कहालिन थालेका छन् । ‘मन्त्री हुनुवित्तिकै अर्थमन्त्रीज्यू अर्थतन्त्रलाई सजिलै ट्र्याकमा ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो । तर,...
जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी तयारी तीव्र पारिए
माघ,काठमाडौं । जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ । आगामी अपि्रलबाट कामदार जापान पठाउने गरी दुबै देशले आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । यसका लागि नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल र जापान सहमत भइसकेका छन् । हाल नेपाल कामदार लैजान जापानले पठाउने मोडालिटीको...
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला लागि सहयोग जुटाउन ‘धुर्मुस’ र ‘सुन्तली’ सोमबार मलेसिया प्रस्थान
काठमाडौँ। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला लागि सहयोग जुटाउन सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जन घिमिरे ‘सुन्तली’ सोमबार मलेसिया प्रस्थान गरेका छन्। क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि सहयोग जुटाउन मलेसियामा ‘धुर्मुस सुन्तली साँझ कार्यक्रम’ हुँदैछ। मलेसियाको विभिन्न सहरमा आयोजना हुनेछ उक्त कार्यक्रममा...
सुगतरत्न वाइडबडी खरिद प्रकरणका मुख्य मान्छे
पुस, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएका २ वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार बैठक डाकेको थियो । सो बैठकमा अधिकांश सांसदहरु निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारविरुद्ध केन्द्रित भए । केही सांसदले उनलाई ‘भ्रष्टाचारका महानायक’ बताए भने केहीले चाहिँ ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा...
महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले घर फोरेर चोरी गर्ने दश जनालाई पक्राउ गरे
महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले घर फोरेर चोरी गर्ने दश जनालाई पक्राउ गरेको छ । वृत्तको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घर फोरी चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न सुमन थापामगर, मनिषा नेम्वाङ, अनिसा खाम्चामगर, सोनी लामा, सुनिल मगर, उद्धव थापा, रविन थापामगर, सविता सुनुवार, सञ्जय तामाङ र गौतम...